Hery manokana amin'ny ahoana? | Hevitra MPANOHARIANA
hn oa ry jentilisa atao inona fotsiny hn io bianco io raha tsy iasa sa atao fampitahorana fotsiny izy io raha izany
Nampidirin'i news2dago @ 13:16, 2008-02-27 [Valio]
enganie mba ho hitan'ny Bianco ity zany ka in moa :)
Nampidirin'i simplex @ 19:01, 2008-02-27 [Valio]
marina mihitsy aloha ilay resaka voambolana e! io ilay môtamô fahatàny :-).
Momba an'ilay resaka "mpanera" : resaka pôlitika io ra jentl a : raha hofoanana ny mpanera ... hanao inona ndray zareo raha tsy hi-sam, sy hangalatra. Ny kibo mantsy tsy mba lamosina :-), ary refa nôna ny kibo mivezy ny fanahy.
Fanampin'izany : amin'izay tany efa mikorontana izao : tsy te hampitombo isa ny fahavalony ra-8 ka aleony tsy maka an'io fanapahan-kevitra io.
Ny tsara sy idealy moa dia ny mandrindra an'io asa io, na koa mamorona asa ho an-dry zareo.
Nampidirin'i Rakoto @ 22:41, 2008-02-27 [Valio]
soso-kevitra : "vondron-tafika manokana" ??
Nampidirin'i Rajiosy @ 14:14, 2008-02-28 [Valio]
Ny maha-tokana azy dia ny heriny, koa mety ve raha atao hoe "tafika mahery", ... na "tafika mahefa" ??
Nampidirin'i Allain @ 17:56, 2008-02-28 [Valio]
ny manokana aminy dia izy miavaka. Asa raha azonareo!
Nampidirin'i jentilisa @ 13:27, 2008-02-29 [Valio]
Misaotra Ra-jentilisa @ ny fanamarihana.
Raha izaho manokana aloha, dia azoko tsara ny hoe "manokana = miavaka".
Ao indray ary fa ataoko hoe ny "mampiavaka" ilay vondrotafika dia ny fanofanana manokana noraisiny, mahatonga azy ho "mahefa" (dia alefa hanao iraka manokana, ets).
Tsy voatery ho dikan=teny mivantana foana angamba e. Ohatra, ny "forces de l'ordre" izao toa ataontsika hoe "Mpitandro Filaminana".
Nampidirin'i Allain @ 21:15, 2008-03-02 [Valio]